ဗဟုသုတ ဖတ်စရာ – Na Pann San
Tag: ဗဟုသုတ ဖတ်စရာ
တရား စီ ရင် မှု ဆို တာ… အရက် သောက်နေ တဲ့ မိန်းမတွေ ရဲ့ မျက်နှာတွေ ပြာနှမ်း လာ တယ်…။ ရုတ် တ ရက် ဟုမိခို က “ ဗိုက်နာတယ်.. မူးတယ်…အား..! ကယ်ကြပါ…” ဟုမိခို လဲကျသွား တယ်..။ ပြီးတော့
သာကောကြီး ဇီဝိန်ဉာဉ် ကို ပြန်နှုတ်ယူပေးဖို့ လင်းယုန်ကြီး ကို အားပေးရင်း ခွစီးရင်း နဂါးကြီးပြိုလဲမည့် ရက်
WHO က ကိုဗစ် အတွက် ဆေးရတော့မည် ဟု ပြောနေပြီ ဒါက ဘာကို ဆိုလိုနေတာလဲ ပြသနေတာလဲဆို ( WHO ) ရဲ့ စကား ကို ဒဲ့မတွေး နဲ့ တရုတ်နဲ့ စပ်ဆက်တွေးကြည့် ပါ အဖြေထွက် ပါတယ် ။ အခု လေသံပစ်နေခြင်း သည်
ပြည်တွင်းကို ကြက်ဥအတုတွေဝင်လာပြီ …ဘယ်ကလဲ…?
ခွဲလို့ လုံးဝမရတဲ့ ကြက်ဥ ၊ ဘဲဥအတုတွေ ကို မြောက်ဒဂုံ မှာ ဟိုင်းဂျက်ကားဖြင့် လိုက်ရောင်းနေ မြောက် ဒဂုံ တပင်ရွှေထီး လမ်းမပေါ် မှာ ဟိုင်းဂျက်ကား နဲ့ လော်စပီကာတပ် လာရောင်းနေသော ခွဲမရတဲ့ ပလစ်စတစ် ကြက်ဥ ဘဲဥ အလိမ်အညာ မိခြင်း မနေ့က မြောက်ဒဂုံ တပင်ရွှေထီးလမ်းမပေါ်
Annular solar eclipse လို့ ခေါ်တဲ့ နေမီးကွင်း ပုံစံ ကြတ်ခြင်း ကို လာမယ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ( ၂၁ ) ရက်နေ့ ( တနည်း ) နယုန် လကွယ်နေ့ မှာ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဖျားပိုင်း အပါအဝင် အာရှ နဲ့
Na Pann San W | June 11, 2020
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက လူတွေ ဝှက်ထားခဲ့တဲ့ ရတနာသေတ္တာတွေ ကို ကျောင်တောင်တွေ သစ်တောတွေ မှာ လိုက်လံ ရှာဖွေ နေတဲ့သူတွေက ထောင်နဲ့ ချီပြီး ရှိပါတယ် ။ သူတို့တွေက အတိတ်တုန်းက လူတွေ ချပေးခဲ့တဲ့ မြေပုံတွေ သင်္ကေတတွေ ဝှက်စာတွေကို အခြေပြုပြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ လိုက်လံ ရှာဖွေနေတာပါ
အိမ်မှာ ပုဏ္ဏက တိုက်နေခြင်း က ဘယ်သူ မှ မဟုတ်ပါဘူး မိမိ အိမ်သူ အိမ်သား တစ်ယောက်ယောက် ပါ တဲ့ ။ ပုဏ္ဏ တိုက်ရင် အိမ်အများ စု မှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ နိမ်နင်းနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ထွက်ပြေး ရတက်လွန်း လို့ ပါ ။ ၁။ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ
ပဲခူြး မို့ေ ဈးကြီး ၁၉လမ်း မှ”ဟင်္သာဧကရီ” အထည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် အပျိုးကြီး မမြတ်သီရိသည်သူ့ အထည်ဆိုင်ရှေ့ကနေ ဖြတ်ဆွဲသွားတဲ့နွား တစ်ကောင် ကိုမြင်ပြီးနွားဆွဲလာ တဲ့ ကလိကျေးရွာ ကနွားပွဲစား ကိုမောင်ထွန်းကို “ ဒီနွားကိုဘာလုပ်မှာလဲ”ဟု အမှတ်မထင်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ သူမနှင့်နွားပွဲစားတို့စကားပြောနေစဉ်နွားကြီးကမျက်ရည်တွေ စီးကျပြီး သူမကိုကြည့်နေတာကြောင့် သနားပြီးဒီနွားကြီးကိုပေါက်ဈေးထက်၃ဆခန့်(၃၄သိန်း) ပေးပြီးဝယ်ယူထားလိုက် ပါတယ်။ အခုဆိုသူကယ်တင်ထား တဲ့နွားကြီးကိုရေမိုးချိုးအမွှေးနဲ့ သာ
” တခြားသူတွေ နဲ့ယှဉ်ရင် ငါ အရမ်းနောက်ကျနေပြီလား…” အချိန်မရလဲ ဒီစာလေးဖတ်ကြည့်ပါ..
Na Pann | May 27, 2020
တခြား သူတွေ နဲ့ယှဉ် ရင် ငါ အရမ်း aနာက်ကျနေပြီလား…. ၂၀၁၂ ခုနှစ် မှာ ကျွန်တော်ဘွဲ့ ရ တယ် ။ အရင်တုန်း ကတော့ ကျောင်းသား ။ အခု ဘွဲ့ရသွားပြီး အလုပ်မရခင်စပ်ကြားမှာတော့ အလုပ် လက်မဲ့ ။ အလုပ်ရှာ မရဘဲ အိမ်မှာအလကားနေ အလကား
Na Pann | May 25, 2020
၁။ တီဗွီကြည့်ပြီး အချိန် ကုန် မခံပါနဲ့။ သူဌေးတွေ က ဘယ်တော့ မှ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေ၊ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်ပြီး အချိန်ကုန် မခံကြပါဘူး။ တီဗွီကြည့်မယ့် အစားစာအုပ်တွေ ပဲ ဖတ်နေလေ့ရှိ ပါတယ် ။Elon Musk ကနေ Warren Buffett အထိနာမည်ကျော် လုပ်ငန်းရှင် သူဌေးတွေအားလုံးဟာ တစ်နေ့တာရဲ့ အချိန်တော်တော်များများကို
“ အဖေ ” “ သား ဆယ်တန်းကျ တယ် ” နွားစာကျွေးနေသော အဖေ ရုတ်တရတ် တုံ့သွား သည်……။ မီးဖိုချောင်ထဲ ထမင်းချက်နေသော အမေက ကြားလိမ့်မည် မထင် ။ အဖေ စကား တလုံး မှ မပြောပဲ ကျတော့်ကို စူးစိုက်ကြည့်နေသည်။”ဟိုးမှာတွေ့လား ငါ့သား! ဓား